Zayat Shopping | Order Success
မူလစာမျက်နှာ Oat Lavender Body Scrub
Oat Lavender Body Scrub
အမျိုးအစား: အလှအပနှင့် ကျန်းမာရေး ,
Lway scrubs ရဲ့ Oat Lavender Body Scrub လေးက saponin ပါဝင်တဲ့အတွက် ချွေးပေါက်တွေကို ပိတ်မိစေတဲ့ အဆီနဲ့ အညစ်အကြေးတွေကို သန့်စင်ပေးပြီး ဝက်ခြံကြောင့် နီမြန်းယောင်ရမ်းတာတွေကို သက်သာစေပါတယ်။
အသားခြောက်တတ်တဲ့သူတွေနဲ့ ကိုယ်ပေါ်မှာ ဝက်ခြံ၊ ကြာဆူးရှိတဲ့သူတွေ သုံးသင့်ပါတယ်။
အသုံးပြုပုံ - အသားအရေကိုရေစွတ်ပြီး scrub လေးနဲ့ ညင်သာစွာပွတ်ပေးပါ။ ၅မိနစ်ခန့်ထားပေးပါ။ ရေဆေးချပြီးတော့အသုံးပြုနေကြရေချိုးဆပ်ပြာနဲ့ရေချိုးလိုက်ပါ။အသုံးပြုပြီးလျှင် lotion or body cream လိမ်းပေးပါ။ အသုံးပြုပြီး၆နာရီကြာတဲ့ထိနေနဲ့မထိတွေ့သင့်တာမို့ ညနေဘက်မှာ အသုံးပြုပေးပါ။
၁၄ ရက်အတွင်းပြန်လဲနိုင်သည်။ ရက်ကျော်လွန်ပါက ပြန်လည်ပေးပို့ခွင့်မရှိပါ။
အနာအဆာပါသောပစ္စည်းမှလွဲ၍ ဝယ်ယူသူ၏ စိိိိိိိိိိိိိိိိိိိတ်ပြောင်းလဲမှုအတွက် ပြန်လည်ပေးပို့ခွင့်မရှိပါ။
What it is: An oat lavender infused sugar body scrub that has amino acid, Vitamin E & anti-inflammatory properties which can reduce the appearance of dark spots, acne and redness, and saponin which is able to remove oil, dust, and impurities that clog pores.
Skin Type: Dry skin type intended for acne and thorns on the body
Ingredients: Sugar, Oat meal, Extra virgin olive oil, Shea butter, Raw honey, Cetyl alcohol, Lavender essential oil, Distilled water
How to use: Before using, stir withawooden stick provided. Scrub the body gently before using shower gel. Leave it for5mins and rinse with warm water. Apply lotion or body cream afterwards to seal its softness.
Can be returned within 14 days. Returns cannot be made after this date.
With the exception of defective items, the buyer may not be able to return the item for any reason.
NO.76/A 8TH QTR, SOUTH OKKALAPA INDUSTRIAL ZONE, YANGON, MYANMAR
Phone: +959 977814273
© Zayat PYI TWIN PYIT. All Rights Reserved.